Shir looga arinsanayo aayaha gobollada SSC oo dhawaan lagu qabanayo gobolka Sool + Duco dhalinyarada gobolladaasi. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandShir looga arinsanayo aayaha gobollada SSC oo dhawaan lagu qabanayo gobolka Sool + Duco dhalinyarada gobolladaasi.
Shir looga arinsanayo aayaha gobollada SSC oo dhawaan lagu qabanayo gobolka Sool + Duco dhalinyarada gobolladaasi.
September 16, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Degmada Boocame ee Gobolka Sool 6 Bisha 10 aad ee fooda inaku soo haysa waxaa lagu qaban doonaa Shir loogu Magacdaray Shirka Iyo Allebariga Dhalinyarada SSC ee Gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn.
Shirka oo sida qorshuhu yahay socondoona mudo 3 ciaho ah ayaa looga hadli doonaa Alle bariga kasokow Qodobo ay ka mid yihiin midnimada iyo aayaha Deegaanadaas.
Sawiro:- Nin dumar isku ekeysiiyay jacayl dartiis oo muqdisho lagu qaabtay.
DAAWO VIDEO:Muuse Biixi oo Been Horay Loo Arag Sheegay,Dhalinyarada Ka Baxsanaya Hargeysa Muqdisho Buuxiyey